Kubonakala lingakatholakali ikhambi – Bayede News
Kubonakala lingakatholakali ikhambi
IChiefs isadonsa kanzima nokudinga ukuba isuse
by Bayede-News Posted on 4 August 2019 5 August 2019
Abadlali beKaizer Chiefs bazimisele ukwenza kangcono kule sizini yezi-2019/20
IChiefs isadonsa kanzima nokudinga ukuba isuse isidanga sevondwe njengoba ngesizini edlule ingenzanga kahleweni ezweni lonke
KBONAKALA usemkhulu umsebenzi obhekene nomqeqeshi weKaizer Chiefs u-Ernest Middendorp njengoba ezakhe zisanda kuthelwa ngehlazo i-Orlando Pirates ngamagoli amabili eqandeni emdlalweni weCarling Black Label Cup ngeledlule.EzaseNaturena (iChiefs) zifike kulo mdlalo emveni kokuthola induku eBotswana zihlulwa yiTownship Rollers ngamagoli amabili kwelilodwa. Amakhosi asepheke athulula abadlali nabaqeqeshi ezama ukulungisa isimo lapho sekuphele amasizini amane enganqobi nesisodwa isicoco kodwa kubukeka kunhlanga zimuka nomoya.
Ngesizini yowezi-2015/16 laqeda endaweni yesihlanu kulogi laphinda ahlulwa kowamanqamu eMTN 8 neTelkom Knockout. Nangesizini yowezi-2016/17 laqeda endaweni yesine langanqoba nesisodwa isicoco. Okwathukuthelisa kakhulu abalandeli abase bekhathele ukubona iqembu labo lithelwa ngehlazo ukuqunjwa phansi yiFree State Stars emdlalweni wesemi final yeNedbank Cup eMoses Mabhida Stadium, eThekwini okwaholela ekutheni abalandeli bagcwalwe enkundleni bekhala ngonkungenzi kahle kweqembu elalicijwa nguKomphela.
Ingcindezi yamphoqa ukuba ashiye maphakathi nayo isizini yowezi-2017/2018 kwaqokwa uGiovanni Solinas odabuka e-Italy. Lo mqeqeshi kwakubhekwe lukhulu kuye kwazise Amakhosi ayesanda kusayina abadlali abafana noKhama Billiat, uLeornado Castro, uVirgil Vries, no-Andriamirado Dax Andrianarimanana. Naphezu kwalokho iqembu laqhubeka nokuba ukudla kwenduku. Ngasekupheleni kwesizini yowezi-2018 iChiefs yanquma ukuyinqamula inkontileka noSolinas yalo ngenxa yemiphumela engemihle.
UMiddendorp uthi ukubuya kuka-Itumeleng Khune owalimala ngoMasingana kuphinde kululame u-Erick Mathoho, uRamahlwe Mphahlele, uHappy Mashiane noLebogang Manyama ngokuphelele bakwazi ukuqala umdlalo kuzolisiza leli qembu likwazi ukuphonsa inselelo kwamanye amaqembu liphinde likwazi ukunqoba izicoco. IKaizer Chiefs izodlala umdlalo wokuvula isizini ekuhambeni lapho izogadulisana neHighlands Park eMakhulong Stadium ngehora le-15:00 ngeSonto. Nakulo mdlalo akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni?